Lego ကိုငါတို့မြင်ရမလား Star Wars: မကြာမီ KOTOR အစုံ?
10 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 286 Views စာ0မှတ်ချက် 5002123: Dartဇ Revan, Aspyr, Bioware, အုတ်ခဲ, Dartဇ Revan, Disney+, ဟောငျးသမ္မတနိုင်ငံ Knights, Lego, Lego Star Wars, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Patty Jenkins, PlayStation, Play Station က 5, Rian ဂျွန်ဆင်, Rogue တပ်မှ, Sony က, Star Wars, Star Wars: စစ်မျက်နှာ, Star Wars: စစ်မြေပြင် II, Star Wars: ဟောငျးသမ္မတနိုင်ငံ၏ Knights, Star Warsဖြေ, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, Star Warsဖြေ, Star Wars: ရှေးသမ္မတနိုင်ငံ, The Bad အသုတ်လိုက်, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Mandalorian, အဆိုပါဟောငျးသမ္မတနိုင်ငံ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
မနေ့က PlayStation Showcase က Knights of the Old Republic ရဲ့ remake ဟာလက်ရာတွေမှာရှိနေတယ်။ Lego Star Wars အစုံလိုက်လား။
ယခင် Bioware ခေါင်းစဉ်များအပါအ ၀ င်ယခင် Bioware ခေါင်းစဉ်များစွာကိုတင်ရန်တာဝန်ရှိသည့် dev စတူဒီယိုသည်လက်ရှိတွင် PlayStation5အတွက်သီးသန့်ဒဏ္legendaryာရီဆန်သော RPG ကိုပြန်လည်ဖန်တီးနေသည်။
Aspyr ရဲ့ဂိမ်းအသစ်မှာငါတို့လက်ထဲရောက်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အချိန်မရှိသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့သိပြီးသား Lego Star Wars အဖွဲ့သည်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများတွင်အစုံမပါ ၀ င်ပါ၊ The Force Unleashed, The Old Republic နှင့် EA ၏ပြန်လည်စတင်ထားသော Battlefront ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးသည်အတူပါ ၀ င်သည်။ Lego နှစ်တွေအစုံ။
၂၀၁၄ မှာလည်း Knights of the Old Republic ကိုအခြေခံတဲ့ minifigure တစ်ခုရှိတယ် ပိုးအိစံ 5002123: Dartဇ Revan အဲဒီကနေကောက်တာပါ အုတ်ခဲ မင်းဒီနေ့ယူရို ၇၅ (သို့) ယူရို ၉၀ နဲ့ပိုနီးလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကငါတို့အများစုအတွက်လက်လှမ်းမမီဘူး။
ပြန်လည်ရိုက်ကူးရန်စီစဉ်ထားသည် Star Wars: Old Republic of Knights - the ပထမဆုံးနောက်တွဲယာဉ် ဒီအတွက် D ကိုထည့်တယ်arth Revan ရှေ့နှင့်ဗဟို - ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမြင်နိုင်သည် Lego အဖွဲ့သည်ထိုဇာတ်ကောင်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးဂိမ်း၏အဖြစ်အပျက်များကို အခြေခံ၍ အပြည့်အစုံသို့တိုးချဲ့ပါ။
ဒါကလက်ရှိ slate တွေကြားမှာပြောခဲ့တယ် Disney+ ရှိုးပွဲများ၊ Patty Jenkins 'Rogue Squadron ရုပ်ရှင်နှင့် Rian Johnson ၏စီစဉ်ထားသောသုံးကားမြောက်၊ လတ်ဆတ်မှုမလုံလောက်ပါ Star Wars မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများ - Old Republic of Knights ကဲ့သို့ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်နောက်ခုံတစ်ခုယူနိုင်သည်။
လောလောဆယ်တော့ငါတို့စောင့်နေတဲ့ဂိမ်းကိုဆက်ကစားနေဖို့ပဲလိုတာပါ။ ထိုအချိန်ကိုဖြည့်ပါ၊ ပံ့ပိုးပါ Brick Fanatics လုပ်ငန်းစဉ်၌ - to ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် LEGO.com နောက်ဆုံးလှိုင်းကိုကောက်ယူသည် Star Wars The Mandalorian, The Clone Wars နှင့် The Bad Batch တို့မှ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO Winter Village Collection 10293 Santa's Visit ၏ပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာသည်
ယနေ့အုတ်ပုံ - ကိတ်မုန့် →